Labels: 2021, Audio, mm, သြဂုတ်လ, အသံဖိုင်များ
Today's News (Quick Search ) August, 2021
A daily struggle for refugees in Myanmar's Rakhine state - UCA News UCAN
A former Rohingya refugee speaks: 'It's not enough to just say sorry' | ABS-CBN News ABS-CBN News
A Rohingya Truck Driver: A Long Road Ahead | Pulitzer Center Pulitzer Center on Crisis Reporting
As the International Community Turns Away, World-wide Karen Solidarity is Needed in ... Karen News
Blasts hit YMBA office and other downtown Yangon locations | Myanmar NOW myanmar-now
Card. Bo denounces Myanmar's “leaders” who fail in their responsibilities - Vatican News Vatican News
CDF promises cash rewards to Myanmar military troops for defecting, surrendering weapons ... myanmar-now
China Opens Rail Line With Access to Indian Ocean via Myanmar - The Irrawaddy The Irrawaddy News Magazine
ED: The plight of the Rohingya continue to this day | Dhaka Tribune Dhaka Tribune
Go Green Myanmar addedanew photo. - Facebook Facebook
House in Waingmaw destroyed by army shelling | Myanmar NOW myanmar-now
Justice for genocide | Philstar.com Philstar.com
KNLA Captures Tatmadaw Camp In Karen State | Burma News International Burma News International
Myanmar Columnist Sithu Aung Myint detained in interrogation centre, lawyer says | Myanmar NOW myanmar-now
Myanmar extends suspension of int'l flights for one more month over COVID-19 - Xinhua Xinhua
Myanmar Junta Troops Die in Weekend Clashes - The Irrawaddy The Irrawaddy News Magazine
Myanmar says Rohingya minority will get COVID-19 vaccine - Religion News Service Religion News Service
Myanmar's Commercial Capital Yangon and Mandalay Rocked by Bomb Blasts - The Irrawaddy The Irrawaddy News Magazine
Resistance fighters preparing for 'all-out' battle as Tatmadaw commander killed in Mindat ... myanmar-now
Rohingya receive Covid jabs as Myanmar junta extends rollout - UCA News UCAN
Rohingya to get vaccinated | The Star The Star Online
Ta'ang Family Killed By Burma Army Shelling In Muse District Burma News International
Tatmadaw Launches Offensive In Loikaw Township | Burma News International Burma News International
UNHCR Bangladesh Operational Update, July 2021 - ReliefWeb ReliefWeb
will be Grand Ledge Sun Theatre's first showing since COVID - Fox 47 News WSYM-TV
Labels: 2021, August, en, Quick Search, Today's News
ယေန့ သတင်း( အမြန်ရှာရန် )သြဂုတ်လ၊၂၀၂၁
စစ်တွေက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် တစ်သိန်းကျော် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေ - RFA
ရန်ကုန်မှာ အမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြချီတက် - VOA
ရှမ်းမြောက်မုံးကိုးဒေသ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ကိုးကန့်တပ် တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၇၀၀ မုံးကိုးမြို့ တွင်းခိုလှုံ -VOA
နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူအင်အား နဲ့ပတ်သတ်လို့ UEC စစ်ဆေး -VOA
ရခိုင်ပြည်နယ် မူဆလင်ဒုက္ခသည်စခန်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးသတင်းယူခွင့် ကန့်သတ်ခံရ - VOA
အကြမ်းနည်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြင်းထန်လာတဲ့ ရန်ကုန် - ဧရာဝတီ
မြန်မာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် အမေရိကန် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်နိုင်သလဲ- ဧရာဝတီ
မြစ်ငယ် CDM မီးရထားဝန်ထမ်း ၁၀၀၀ ကျော် ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ - ဧရာဝတီ
မုံးကိုးတိုက်ပွဲ စစ်ကောင်စီဘက် ၁၅ ဦး ကျ လက်နက်ခဲယမ်း သိမ်းဆည်းရရှိ-ဧရာဝတီ
ကလေးမြို့တောင်ပိုင်း စစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တို့  တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား- RFA
ရန်ကုန်မြို့နယ်တချို့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား၊ လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့ကြား စစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြ -VOA
စစ်ကောင်စီအစိုးရ ICJ အမှုရင်ဆိုင်ရေးလုပ်ရပ် ရိုဟင်ဂျာတို့အကျိုးမရှိနိုင်-VOA
သြဂုတ်လအတွင်း စစ်ကောင်စီဘက်က ၁၀၀ ကျော်သေတယ်လို့ KNLA တပ်မဟာ (၅) ထုတ်ပြန်- RFA
DNA သတင်းထောက်ဟောင်း ကိုမျိုးစံစိုး ဖမ်းဆီးခံရ- RFA
လှည်းကူးမြို့မှာ ရပ်ထားတဲ့ စစ်ကောင်စီကားပေါ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်- RFA
CDM ရဲတပ်သားရဲ့ဖခင် သဲဖြူဝရွာမကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ပစ်သတ်ခံရ- RFA
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အတွက် ပြည်သူတွေဘက်က အလားအလာကောင်း- RFA
တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မန်းဂျော်နီရဲ့သား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရ- RFA
Labels: 2021, mm, သြဂုတ်လ, ယနေ့သတင်း အမြန်ရှာရန်
Labels: 2021, mm, သြဂုတ်လ, မြန်မာ့အလင်း, မြဝတီ, သတင်းစာ, ကြေးမုံ
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးမယ်လို့ စစ်ကောင်စီပြော
စစ်တွေမြို့က မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်က တွေ့ရစဉ်Photo: RFA
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်ပါ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ပြန်ကြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဒီနေ့ ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နေပြည်တော်က သတင်း စာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
"ကျွန်တော် အလေးထားပြီး ပြောလိုတာ တစ်ခုကတော့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလီများကိုလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသည် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုပဲ ဖြစ်ပါတယ်"
Labels: 2021, mm, ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး, စစ်ကောင်စီ, ရခိုင်ပြည်နယ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး နိုင်ငံတကာ ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် သတိပေး
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်အရေးဟာ မေ့မပစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အ တူ တသားထည်း ဆက်လက်ရပ်တည်ပေးကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် Antonio Guterres က ပန် ကြားလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ရော ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ခံပေးထားတဲ့ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှအစိုးရနဲ့ သူ့ပြည်သူတွေနဲ့ပါ တသားတည်း ဆက်လက်ရပ်တည်ပေးဖို့ အတွင်းရေးမှုးချုပ်က ပန်ကြား လိုက်ကြောင်း အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရ Stephane Dujarric က ကြာသပတေးနေ့ ကုလရုံးချုပ် သ တင်း စာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကလည်း ဆက်ပြီး တက်တက်ကြွကြွ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ မေ့မပစ်သင့်တဲ့ ပြဿနာ တရပ်လို့ ပြောပါတယ်။
Labels: ရိုဟင်ဂျာ, 2021, mm, ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်, သတင်း, သတိပေး, နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး
လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့သင့်တယ်လို့ မစ္စယန်ဟီးလီ ပြော
ရဲခေါင်မြင့်မောင် (ဝါရှင်တန် ဒီစီ)
သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်က အွန်လိုင်းကနေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်တဲ့ လေး နှစ်မြောက် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားသူတွေ တက်ရောက် စကားပြောခဲ့ကြပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ အထူးသံတမန်ဟောင်း မစ္စ ယန်ဟီးလီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ် လှုပ်ရှားသူတွေ၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်း တက်ရောက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအတွက် ဝမ်းနည်းစကား ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
Labels: 2021, mm, Video, မစ္စယန်ဟီးလီ, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု, သတင်း